Thin Nu Swe•5days ago
သိမ်ဖြူမီးရထားဝင်း ပဋိပက္ခအတွင်း ရပ်ကွက်ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ တပ်ထောက်ခံသူတွေကို ရဲတွေလာခေါ်သွား
ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၅) ရက်နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေကြားရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေ ရပ်ကွက်ထဲကို ဝင်လာတာကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေ သံပုံးတွေ တီးခဲ့ရာ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေက ဆဲဆိုပြီး ခဲတွေ၊ ဖန်ဂေါ်လီတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီး တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေနဲ့ပါ ရန်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်ထောက်ခံသူတွေရန်ပြုမှုကြောင့် သိမ်ဖြူမီးရထားဝင်းက ရပ်ကွက်နေပြည်သူ (၂၀) ‌ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက တပ်ထောက်ခံသူ အယောက် (၅၀) နီးပါးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ရဲကားတွေ ရောက်လာပြီး လာခေါ်တာကြောင့် ညှိနှိုင်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်း ရပ်ကွက်နေပြည်သူတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေမှာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းကတ်ပြား၊ အနီအစိမ်းအမှတ်အသားဖဲကြိုးတွေလည်း တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မန္တလေးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတစ်ဦး သေဆုံးမှု ကိုဗစ်ကြောင့်ဟုဆိုကာ မိသားစုဝင်တွေ အလောင်းထုတ်ခွင့်မရ
မန္တလေးမြို့ ကမ်းနားလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ဒူးခေါင်းကိုသေနတ်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ကိုရာဇာအောင်ဆိုသူဟာ
ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်နေ့မှာ မန္တလေးစစ်ဆေးရုံမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်လို့ ကိုရာဇာအောင်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပရဟိတမင်းခေါင်အဖွဲ့က Duwun ကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။
သေနတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ကိုရာဇာအောင်ကို စစ်ဆေးရုံမှာ ကုသပေးခဲ့ရာ ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး
ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ စစ်ဆေးရုံဘက်က အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ မိသားစုဝင်တွေက အလောင်းထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်
ကိုဗစ်ကြောင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အလောင်းကို ထုတ်မပေးဘဲ ဆေးရုံရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့သာ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ကြောင်း
ကိုရာဇာအောင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မဖြူဖြူဝင်းက ပြောပါတယ်
မင်းဘူးမြို့မှာ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြသူ (၇) ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့ ညနေပိုင်းမှာ မင်းဘူးမြို့ရဲ့ တည်ဆောက်ဆဲ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကာ အမျိုးသား ၃ ဦးကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံအရှေ့မှာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးသွားသူတွေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေက ရုံးတွေ‌ရှေ့မှာ ဆန္ဒမပြ၊ CDM လုပ်ဖို့ ဖိအားမပေးဘူးလို့ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ရပြီး လမ်းတွေပေါ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒပြဖို့အတွက်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သဘောတူညီပေးခဲ့ကြောင်း လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
CDM ဝန်ထမ်းတွေကို CRPH က မူရင်းလစာအတိုင်းထောက်ပံ့မယ်
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ CDM. လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ပြီးရုံးမတက်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို မူရင်းလစာအတိုင်း CRPH ကထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်မြို့နယ် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်လိူင်ဝင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် CDM တိုက်ပွဲ ကာလပိုရှည်ခဲ့ရင်လည်း ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် CDM ပဒေသာပင်သဘောမျိုးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ် လို့ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြည်မြို့က အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ပြီး လူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။
ပုဒ်မ (၅၀၅)နဲ့ အမှုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ မိုးညိုမြို့နယ်က CDM မီးသတ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီခရိုင် မိုးညိုမြို့နယ်က နယ်မြေမီးသတ်စခန်းတစ်ခုက တပ်ကြပ်ကြီးနှစ်ဦးဟာ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုကို ဖေေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့မှာစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သူတို့ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ရန်ကုန်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနကလည်း သူတို့ နှစ်ဦးကို (၂၁) ရက်တိတိ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ပါက အလုပ်ထုတ်မှာဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်က ချေးထားတဲ့ ချေးငွေ (၂)လစာကို ပြန်ဆပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပေဒအရ လည်း အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းကို ဌာနက တရားဝင် အကြောင်းကြားလာတယ်လို့လည်း အဆိုပါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးကပြောပြပါတယ်။
လူငယ်၊လူလတ် အင်အားငါးဆယ်ကျော် ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေ
နတ်မောက်လမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ ဂျပန်သံရုံးရှေ့မှာတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က စောင့်ကြည့်နေပေမယ့် လူငယ်၊လူလတ် အင်အားငါးဆယ်ကျော်က ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ ကြွေးကြော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသူတွေ ရဲအင်အား ၂၀၀န်းကျင်က စောင့်ကြည့်နေသလို နတ်မောက်လမ်းနဲ့ ဝင်္ကဘာလမ်းထိပ်ကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ဂျပန်သံရုံးအနီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြပြီး အခြေအနေကောင်းမွန်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေး ၇၃လမ်းမှာ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့နေ
မန္တလေးမြို့ ၇၃ လမ်း၊ ၂၈ လမ်းနဲ့ လမ်း ၃၀ ကြားတစ်လျှောက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ဆန့်ကျင်ရေးသပိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။
၇၃ လမ်းကို တောင်ဘက်ကနေတက်လာပြီးထိုင်သပိတ်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ မြောက်ဘက်မှာအသင့်နေရာယူထားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ လူစုမခွဲရင် ဖြိုခွင်းခံရတော့မယ့်အခြေအနေအထိတင်းမာနေတယ်လို့ Duwun သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
မင်းဘူးမြို့တွင် ဆန္ဒပြလူငယ် (၆)ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီးထား
မင်းဘူးမြို့ ခရိုင်ပြည်သူဆေးရုံကြီးဘေးတွင် ယနေ့ (ဖေဖော််ဝါရီလ ၂၄ ရက်) နံနက်ပိုင်းက အထိုင်ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လူငယ်(၆)ဦးကို ဖမ်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရပါတယ်။
နေ့လယ် ၁၂နာရီအထိရရှိထား‌သော သတင်းများအရ အဆိုပါဖမ်းဆီခံရသူလူငယ်များအားပြန်လွှတ်ပေးရန် ပြည်သူများမှ မင်းဘူးမြို့ ရဲစခန်းရှေ့တွင်တောင်းဆိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယင်းဖြစ်စဉ်အား မင်းဘူးရှေ့နေများက လိုက်ပါကူညီသွားမယ်လို့လည်း ရှေ့နေများက ဆိုပါတယ်။
ပျဉ်းမနားတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအနီး ရဲအင်အားနဲ့လိုက်လံစောင်ကြည့်မှုပြုလုပ်
ဒီနေ့ မနက် ပျဉ်းမနား အ.ထ.က(၁) ရှေ့ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ လူထုသပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ လူအင်အား၁၀၀ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပျဉ်းမနားမြို့တွင်းလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်နေစဉ်မှာ လူထုနဲ့ မလှမ်းမကမ်းကနေ ရဲကားတွေ လှည့်လည်နေခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေ မူလစုရပ်ကို ပြန်ရောက်ပြီး လူစုခွဲပြီးချိန်မှာတော့ အဲဒီနေရာကို ရဲတပ်ရင်းအင်အား ၅၀ရောက်ရှိလာပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အောင်ဘာလေထီဖွင့်ရက် မတ်လ၁၅ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း
မတ်လ ၁ရက်မှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် ၂၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲကို မတ်လ ၁၅ကို ရွှေ့ဆိုင်းတယ်လို့ စီမံကိန်း ၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်က ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲက (၁၈၈)ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
မနေ့က နေပြည်တော်မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒပြမှုအတွင်း ဖမ်းဆီးခံသူ (၁၉၃)ထဲက (၁၈၈)ဦးမှာ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး အထဲမှာ (၅)ဦးကျန်ရှိနေခဲ့သေးတယ်လို့ လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့ ပြောစကားအရ သိရပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူတွေက သူတို့နဲ့အတူပါသွားတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ သိမ်းစည်းထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေတော့ ပြန်မရသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
မြန်မာမှာရွေးကောက်ပွဲသစ်ကျင်းပဖို့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမဟုတ်မှန်ဟု အင်ဒိုနီးရှားပြန်ရှင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲသစ်တစ်ရပ်ကျင်းပဖို့ အတွက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကူညီပေးမယ့် အစီအစဉ် ပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူ တာကူဖေဇက်ရက်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြကြနေကြသူတွေကိုလည်း အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်က ထွက်တွေ့ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ အင်ဒိုနီးရှားကထောက်ခံမှုမရှိကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြားမှုမှာလည်း နားလည်မှု လွဲတာသာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။﻿
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို ကြားပေးဖို့ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ ပြည်သူများကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုတာကို ကတိတည်ဖို့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေက တွန်အားပေးမယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီး မနေ့ညကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းကြောင့် ဒီကနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းနဲ့ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းရှိ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့သွားရောက်ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ မြန်မာပြည်သူရာနဲ့ချီ ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ အသံတွေကိုကြားပေးဖို့ ၊ လေးစားလိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကို ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)နဲ့ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်အောင်က ဒီကနေ့ ဖေဖော််ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရှေ့နေတွေအနေနဲ့လည်း ဒီကနေ့မှာ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတင်ဖို့ တရားရုံးကို ရောက်ရှိနေပေမယ့်လည်း ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကို တရားရုံးထုတ်လာခြင်းမရှိဘဲ Video Conferencing ဖြင့်သာရုံးထုတ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
"မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒတွေကို လေးစားရမယ်လို့ အင်ဒိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒများကို လေးစားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Retno Marsudi က ယနေ့ (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ရက်) မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ၎င်းတို့ ကတိကဝတ်အတိုင်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မှု သေချာစေရန် စောင့်ကြည်သူများ စေလွှတ်သွားမယ့် အစီအစဥ်တစ်ခုကို အင်ဒိုနီးရှားက အာဆီယံနိုင်ငံများကြား စည်းရုံးတိုက်တွန်းနေကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ မြန်မာပြည်သူလူထုထံမှ ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးနောက် အင်ဒိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ထိုသို့ ပြောကြားလာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က နေပြည်တော်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေနဲ့ ယခုအချိန်အထိ အဆက်အသွယ်မရသေး
မနေ့က (၂၂၂၂၂)ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်နေ့က နေပြည်တော်မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အတင်းဝင်ရောက်ကာ သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ဖောက်ပြီး လုံခြုံရေးအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ဆန္ဒပြပြည်သူ ၂၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယနေ့မနက်ပိုင်းအထိ မိသားစုဝင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံသူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မရရှိသေးဘူးလို့ မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့် ပြောပြလာပါတယ်။
မန္တလေး၊ ကမ်းနားလမ်းဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ်ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုသက်နိုင်ဝင်းရဲ့နာရေးကို ပြည်သူထောင်နဲ့ချီ လိုက်ပါပို့ဆောင်
မန္တလေး ကမ်းနားလမ်းဆန္ဒပြပွဲမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုသက်နိုင်ဝင်းရဲ့နာရေးကို ဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ မန္တလေးမြို့ကပရဟိတအသင်းကားအစီးငါးဆယ်ကျော်နဲ့ ပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီးလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးတဲ့အရပ်သားနှစ်ဦးထဲမှာ ကိုသက်နိုင်ဝင်း(ခ)ကိုမင်း အသက် ၃၇ နှစ်လည်းပါဝင်ပြီး ကိုသက်နိုင်ဝင်းက ပြည်သူနဲ့အတူ CDM ကိုဝန်းရံထောက်ခံနေစဉ် ဆန္ဒပြပွဲမှာပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ကိုသက်နိုင်ဝင်းမှာ ဇနီးဖြစ်သူမသီတာနှင်းနဲ့ သားဖြစ်သူ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် တတိယတန်းတက်ရောက်မယ့်မောင်အောင်ဖုန်းခန့်တို့ ကျန်ရစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့ လှိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအချို့ နုတ်ထွက်စာတင်
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားတဲ့ လှိုင်မြို့နယ်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၅) ဦးဟာ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့မှာ အသီးသီးနုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ လှိုင်မြို့နယ်က တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
လှိုင်မြို့နယ် အမှတ် (၁) ၊(၂)၊ (၃) ၊ (၅) ၊(၁၃) ရပ်ကွက်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့ လှိုင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထံကို တင်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH)က ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လည်းကောင်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရုံးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ရက်မှာ ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
CRPH ရဲ့ နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးထင်လင်းအောင်ကို လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ဒေါက်တာဆာဆာကို လည်းကောင်း ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
ပဲခူးမြို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းက မီးရထားဝန်ထမ်းတစ်ဦး အမောဖောက်ပြီး ကွယ်လွန်
ဒီကနေ့ ဒီကနေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်က ပဲခူး နွေဦးတော်လှန်ရေး ၂၂၂၂၂ အထွေထွေ သပိတ်မှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ မီးရထားဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ဦး ပဲခူးဘူတာရှေ့အရောက်မှာ ရုတ်တရက်အမောဖောက်ကာ မူးလဲကျပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မူးလဲကျသွားခဲ့တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် သက်သာမှုမရှိတာကြောင့် ဆေးခန်းကိုထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့ရာ ဆေးခန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာ အသက်မရှိတော့ကြောင်းကို သိရှိရတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မီးရထားဝန်ထမ်းနာမည်ကတော့ ဦးမျိုးမင်းထွန်းဖြစ်ကာ အသက် ၄၄နှစ်အရွယ်ရှိပြီး မိခင်ကြီးနဲ့ အတူမိသားစုဝင် ၅ ဦးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ကမ္ဘာမှာ အာဏာသိမ်းမှုတွေအတွက်နေရာမရှိဟု ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၂) ရက်မှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဗာမြို့မှာ မြန်မာ့အရေးကို ထည်သွင်းဆွေးနွေးမယ့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးအတွင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတဲရက်စ်က “မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ ၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အဆုံးသတ်ပေးဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကို လေးစားဖို့” နဲ့ “ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ အာဏာသိမ်းတွေအတွက် နေရာမရှိပါကြောင်း” ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီမိုကရေစီကို သွေဖယ်ပြီး ချိုးဖောက်နေတဲ့ ကျူးလွန်မှုများကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေကို အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးပါကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ .
နေပြည်တော်မှာ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ရဲနဲ့စစ်တပ်အင်အားအများအပြားသုံးပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
နှစ်ငါးလုံးပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်ဆင်နွှဲမှုအဖြစ် ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၂) ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ကာ နေပြည်တော်က လူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံ အသီးသီးက အင်အားသိန်းနဲ့ချီ ချီတက်လာခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြပြည်သူတွေ စုရုံးနေကြစဉ်အတွင်း ရဲနဲ့ စစ် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ အင်အားအများအပြားသုံးပြီး ဖြိုခွင်းခဲ့ကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ဘယ်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျမသိရသေးဘဲ သတင်းရယူနေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးမယ့်ပုံပြုလုပ်နေတာကြောင့်သတင်းထောက်တွေ ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း မြေပြင်အခြေအနကို သတင်းရယူခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်သတင်းထောက်ရဲ့ ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။
၂ငါးလုံးပြည်လုံးကျွတ် သပိတ်စစ်ကြောင်းအဖြစ် မြို့နယ်အသီးသီးပါဝင်ဆန္ဒပြကြ
ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ ကိုတော့ ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်စစ်ကြောင်းအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ မြို့နယ်တိုင်းက အင်အားအများအပြားနဲ့ ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့၊ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာလည်း သိန်းချီတဲ့ လူအင်အားနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလို နယ်မြို့များဖြစ်ကြတဲ့ မကွေး၊ ဟင်္သာတ၊ ဇလွန် ၊ ဆိတ်ဖြူ ၊ မင်းဘူး၊ ပုသိမ်၊ ထားဝယ်၊ ပဲခူး၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ငူ၊ ဇီးကုန်း၊ ကျွဲပွဲ၊ ဖျာပုံ၊ ချောင်းသာ ၊ တန့်ဆည်၊ ပေါင်းတည်၊ ဖားအံ၊ မအူပင်၊ တောင်ကြီး ၊ မြစ်ကြီးနား စတဲ့ တိုင်းဒေသအသီးသီးက ဝန်းရံသူပြည်သူပေါင်းများစွာ ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၂ ငါးလုံးပြည်လုံးကျွတ် သပိတ်ဆင်နွှဲမှုအဖြစ် နေပြည်တော်မှာ သိန်းနဲ့ချီ အင်အားပြ
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ (၂) ငါးလုံး ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်ဆင်နွှဲမှုကိုစတင်နေရာ နေပြည်တော်မှာလဲ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေ လမ်းပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်။
သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ပျဉ်းမနား အ.ထ.က (၁) ကျောင်းရှေ့ကစတင်ကာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေလာရောက်လို့မရအောင် သံရုံးတွေသွားတဲ့လမ်းမှာ အတားအဆီးတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ထား
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ အမေရိကန် သံရုံးကိုသွားတဲ့လမ်းကို ပိတ်ထားကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က လုံခြုံရေးယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မနက်် ၁၁ နာရီခန့်မှာ အမေရိကန်စင်တာနားအထိ ဆန္ဒပြလူအင်အားများပြားလာတဲ့အချိန်မှာ စစ်ကား ၁၅စီးခန့်၊ ရေကား ၄ စီးခန့် နဲ့ လုံခြုံရေးအင်အားအများအပြား ဝင်ရောက်လာပြီး အတားအဆီးတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ တခြားသံရုံးတွေနဲ့ UN ရုံးကို သွားတဲ့ လမ်းတွေမှာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေလာရောက်လို့မရအောင် အတားအဆီးတွေ ကာရံထားပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေကတော့ အတားအဆီးတွေရှေ့ထိုင်ချပြီး ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့ ဖြစ်စဥ်မှာ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ရဲ့ ဈာပနကို ဒီကနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်) မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ လူထုက ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ရဲ့ဈာပနကို လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့က ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ဦးခေါင်းကို ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး ဦးနှောက်သေဆုံးသွားခဲ့ရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ အသက်ရှူပါ ရပ်တန့်ကာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ပခုက္ကူမှာ သံပုံးတီးတဲ့ ဇနီးမောင်နှံကို အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားနဲ့ဝင်ခုတ်မှုဖြစ်
ပခုက္ကူမြို့နယ်မှာ မနေ့ညက သံပုံးတီးချိန် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို အိမ်အနီးဝန်းကျင်က အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားနဲ့ဝင်ရောက် ခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဓားနဲ့ခုတ်မှုကြောင့် အဆိုပါဇနီးမောင်နှံ ဒဏ်ရာအများအပြားရရှိထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဆိုင်များပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ‌ ‌ဈေးဝယ်စင်တာကြီးများထုတ်ပြန်
ပြည်တွင်းဈေးဝယ်စင်တာတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ City Mart Supermarket ၊ Ocean Supercenter၊ ဂမုန်းပွင့်နဲ့ စိန်ဂေဟာ ဈေးဝယ်စင်တာ တို့ကို မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပြန်ဖွင့်မှာဖြစ်ကြောင်း ဈေးဝယ်စင်တာ အသီးသီးက အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့ကို “၂ ငါးလုံးမှာ ပါဝင်ပေး မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး” အဖြစ် စျေးပိတ်၊ အလုပ်ပိတ်၊ ရုံးပိတ်ကာ အကြီးမားဆုံး ပြည်လုံးကျွတ် သပိတ်တိုက်ပွဲကို မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ဆင်နွှဲကြမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဆော်သြတိုက်တွန်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဈေးဝယ်သူတစ်ဦး ကြက်သွန်နီအိတ်ပေါက်ကျတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေက လမ်းပေါ်ကကြက်သွန်နီတွေကို ကူညီဝိုင်းကောက်ရင်း လမ်းပိတ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာပါ။ ယခင်ရက်တွေက လမ်းတွေပေါ်မှာ ကားပျက်တဲ့ကမ်ပိန်းကြောင့် ရဲတွေက ကားတွေကို ဆွဲဖို့စောင့်နေတာကြောင့် ဒီနေ့တော့ လမ်းမပေါ်မှာ ကြက်သွန်နီလိုက်ကောက်တဲ့ ကမ်ပိန်းစတင်လိုက်တာပါ။
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွင်းခံရပြီး ကျောင်းသား (၄)ဦးဖမ်းဆီးခံရ